Etu esi lelee akụkọ Instagram na ntanetị | Nzukọ Ekwentị
Akụkọ banyere Instagram na-enye anyị ohere ịmara awa ikpeazụ nke ndị anyị na-eso site na obere vidiyo, vidiyo nwere ụbọchị mmebi kemgbe dị naanị maka awa 24 mgbe e bipụtara ha, ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma maka ọtụtụ ịmata, ọ ga-ekwe omume budata akụkọ Instagram ma si otú ahụ debe ha ruo mgbe ebighị ebi.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile mara mma, ma ọ dịkarịa ala maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ka ha nọgide na-enwe usoro nzuzo nke na ha achọghị ka a manye ha imehie. Nke a bụ n'ihi ọrụ nke ikpo okwu a, ebe ọ bụrụ na onye ọrụ bipụtara akụkọ na Instagram, ha ga-enwe ike ịnweta ndepụta ebe a na-egosipụta ndị niile hụrụ ya.
N'ihi ọrụ a dị iche, ọtụtụ ndị bụ ndị na-eche esi lelee akụkọ Instagram na ntanetị, na-enweghị iji ngwa ọrụ ma ọ bụ site na weebụsaịtị iji zere ịhapụ njirimara nke ọchịchọ ịmata anyị na nke ahụ, na mberede, Instagram amabeghị anyị karịa karịa ka ọ maralarị anyị.
Etu ị ga-esi weghachite ozi ederede ehichapụ na Instagram
1 Kedu ihe bụ Akụkọ Akụkọ Instagram
2 Etu esi lelee akụkọ Instagram
3 Etu esi lelee akụkọ Instagram na-enweghị aha
3.1 Mee ọ rụọ ọrụ ụgbọelu mode
3.2 Mepụta akaụntụ nke abụọ
3.3 Zoro ezogram
3.4 Ngwa iji lelee akụkọ na-enweghị aha
Kedu ihe bụ Akụkọ Akụkọ Instagram
Akụkọ Instagram bụ vidio dị mkpụmkpụ (nke nwere ike ịnwe foto) sitere na njirimara nke mere ka ikpo okwu Snapchat bụrụ nke a ma ama, nke nwere oge nke 24 awa site na mbipụta ha. N'ịbụ ephemeral, ọdịnaya a bụ tumadi gbakwasara ụlọ ọrụ na ndị na-egbu egbu iji bulie akara gị.
Ndị na-eji ụkwụ na-ejikwa ha eme ihe mee ka ndị na-eso ụzọ gị mara (ọkachasị ndị enyi) Ihe ha mere n’ụbọchị ndị a, ihe ha chọrọ ime dịka ịga ebe nkiri, gaa n’ugwu, saa ahụ n’ụsọ osimiri ...
Ikpokoro a dịwo anya kwụsịrị ịbụ netwọk mmekọrịta nke nri ịghọ ebe ikpo okwu nwere obere ọdịnaya dị mkpa ma ọ bụrụ na a ga-agwa ihe ị na-achọ. Anyị nwere ike ịsị na Instagram bụ netwọkụ mmekọrịta ka ị kwụpụ ma tinye ya ezé ogologo.
Etu esi lelee akụkọ Instagram
Instagram akụkọ na-anọchi anya n'ụdị okirikiri n'elu ihuenyo ahụ nke akaụntụ anyị ma gosipụta naanị mgbe otu n'ime ndị anyị na-eso bipụtara akụkọ.
Mgbe akụkọ dị ọhụụ, a na-egosi ya otu oke ọbara, iji gwa anyị na ọ bụ akụkọ ọhụrụ nke anyị ahụbeghị. Iji lelee akụkọ Instagram site na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka, anyị kwesịrị pịa gburugburu nke onye na-anọchi anya akụkọ na-egwu egwu na-akpaghị aka.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ya site na kọmputa, anyị nwekwara ike ịme ya, ebe ọ bụ na interface ahụ bụ otu ihe ahụ, na-anọchite anya akụkọ ndị dị na gburugburu gburugburu onye anyị na-eso na elu ihuenyo.
Ozugbo anyị pịrị na akụkọ ahụ, anyị ga-abụ akụkụ nke ndepụta Instagram mepụtara maka onye ọrụ bipụtara ya, yabụ nke a ị ga-amata n'oge niile na anyị nyochara akwụkwọ gị. Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike izere ya ma ọ bụrụ na ị gbasoo usoro ndị anyị gosiri gị na ngalaba na-esote.
25 aghụghọ maka Instagram ma mee ihe dị ịtụnanya
Etu esi lelee akụkọ Instagram na-enweghị aha
Mee ọ rụọ ọrụ ụgbọelu mode
Ngwa niile chọrọ njikọ ,ntanetị, ozugbo anyị mepere ha, budata akụkụ buru ibu nke ọdịnaya dịnụ ka ọ bụrụ na ịnweta ya, na-ebu ngwa ngwa na onye ọrụ anaghị echere.
N'ihi ọdịmma a, ndị ọrụ chọrọ igbochi ndị ọzọ ịmara na ha letara akụkọ ha, nwere ike iji ya mee ihe. Nke mbụ, anyị aghaghị - mepee ngwa ma chere obere sekọnd.
Mgbe anyị hụrụ na akụkọ Instagram nke ndị anyị na-eso na-egosi n’elu anyị rụọ ọrụ ụgbọelu mode nke anyị mobile ngwaọrụ.
N'oge a, ama anyị enweghị njikọ ịntanetị, mana ebe ọ bụ na ebujuru ọdịnaya ahụ na mbụ, anyị nwere ike ịnweta akụkọ ndị ahụ na-ahapụghị akara na sava Instagram.
Iji rụọ ọrụ ụgbọ elu mode, anyị ga-enweta akara obubọk site sliding mkpịsị aka anyị si n'elu ihuenyo ala na pịa bọtịnụ nke ụgbọelu na-anọchi anya ya.
Etu ị ga - esi mara ma egbochila gị na Instagram site na usoro ndị a
Mgbe ụfọdụ nhọrọ kachasị mfe gafere mepụta akaụntụ nke abụọ na Instagram ma soro onye anyi choro igba asiri banyere akuko ha. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịdaba na nsogbu ma ọ bụrụ na onye anyị chọrọ iso ga-akwado arịrịọ anyị ka anyị soro.
Ngwa ahụ na-enye anyị ohere icheta akaụntụ nnabata dị iche iche yana paswọọdụ, yabụ gbanwee n'etiti akaụntụ mbu na nke anyị ọ bụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe.
N'ihi ndọtị Zoro ezogram (maka Microsoft Edge na Chrome) anyị nwere ike ịnweta profaịlụ nke ndị anyị chọrọ ma lelee mbipụta ha na akụkọ niile ha na-ebipụta n’agwaghị gị ọkwa na ọ bụ anyị.
Ọ dị mkpa ịbanye data nke akaụntụ Instagram anyị iji nwee ike ịnweta. Site na akara ngosi ndọtị, anyị nwere ike ịgbalite ma ọ bụ kwụsị ọrụ nke ngwa ahụ. Ozugbo n'ime Instagram, anyị ga-enweta ndọtị na gbanye ya ma ọ bụ gbanyụọ ya dabere na anyị achọghị ịhapụ otu nleta nke nleta anyị ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịma na onye ọrụ ahụ maara ya.
Ọ bụrụ na anya na-anọchi anya ókè egosipụtara na acha uhie uhie, anyị agaghị ahapụ otu nleta nke nleta anyị na akụkọ ihe mere eme. Ọ bụrụ, n'ụzọ megidere, egosiri na agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, onye ọrụ nke bipụtara akụkọ ahụ, ga-amara na anyị nyochala ya.
Ngwa iji lelee akụkọ na-enweghị aha
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere n'aka anyị ọtụtụ ngwa na-enye anyị ohere, ọbụlagodi ma hụ, lelee akụkọ Instagram na-enweghị aha, ịbụ ihe dị mkpa iji banye na akaụntụ Instagram anyị.
Eziokwu a dị mfe na-eme ka anyị jụọ onwe anyị ọtụtụ obi abụọ banyere arụmọrụ ya n'ezie. Kedu ihe kpatara ị chọrọ iji nweta akaụntụ Instagram m? O doro anya, anyị ga-agbapụ dị ka ihe otiti site na ụdị ngwa ndị a na / ma ọ bụ ibe weebụ na-akpọ anyị òkù tinye data nke akaụntụ Instagram anyị.
Otú ọ dị, site na ndọtị dị ka Hiddengram, nke ahụ anaghị eme. Ọ bụghị otu iji iji ndọtị maka ihe nchọgharị ebe anyị banyere data nke akaụntụ anyị (ma site ebe ahụ ha anaghị apụta), karịa iji ngwa nke anyị na-amaghị n'ezie ma ọ bụrụ na ndị a ga-aga sava ndị ọzọ ma na-agba ọsọ n'ihe egwu na akaụntụ anyị bụrụ isi iyi nke spam maka ndị niile na-eso ụzọ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu esi lelee akụkọ Instagram na ntanetị
Ebe ibudata akwukwo ihe omuma nke oge a
Idozi nsogbu: "VLC enweghị ike imeghe MRL"